Arsiva ara-panahy sy ara-pivavahana - tahiry afrikhepri
Fifandraisana Sokajy FIVORIANA SY FIVAVAHANA
FIVORIANA SY FIVAVAHANA
The Divine Matrix - Gregg Braden (Video)
Mety hamaha ny zava-miafina lalina indrindra tamin'ny fiainantsika ve ny fanambadian'ny siansa sy ny toe-panahy ary hamaha ireo olana manohintohina ny hoavintsika? Raha naseho ...
Avy amin'ny razana afrikanina ka hatramin'ny "olo-masina kristiana"
Amin'ny toe-panahy afrikana dia manome voninahitra ny razana isika. Marina fa tsy maty ny razana (satria tsy tena misy any Afrika ilay antsoina hoe fahafatesana). In ...
Izay manefa ny trosany dia manankarena - Bhikkhu Revata
Ny fampianarana izay tiako hotaterina dia mifototra amin'ny Soutta Antevasika an'i Samyutta Nikaya. Antevasika dia midika hoe mpianatra anaty. Amin'izao toe-piainana 8 izao, aiza ny mpianatra?
Andriamanitra tokana, fivavahana telo (Lahatsary)
Fivavahana telo misy Andriamanitra tokana sy tantara iraisana. Ny jiosy, ny kristiana ary ny silamo dia mizara tantara mitovy momba ny famoronana izao tontolo izao tao anatin'ny enina andro, ny an'i Adama sy i Eva, ny ...
Tsiambaratelo ny angovo Pyramida
Manana fananana angovo ve ny piramida? Izany no azo vakiana ao amin'ny boky maro amin'ny esotericism. Hatramin'ny Antiquity dia maneho ny halavirana lavitra indrindra ny fifandraisana tsara indrindra eo amin'ny tanjaka sy ...
Izay tsy ilazana anao momba an'Andriamanitra amin'ny fiainana ara-panahy Afrikana marina
Mba hahafantarantsika ny natioran'i Imana na ny Amen na ny mpamorona amin'ny eritreritra afrikana tena izy dia tsy maintsy tadidintsika aloha fa ho an'ny razambentsika, ny fitsipika masina dia ...
Fitoviana misy eo amin'ny fehezan'i Hammurabi sy ny didy folo
Ny fehezan'i Hammurabi dia iray amin'ireo lalàna voasoratra tranainy indrindra hita. Io dia namboarina tamin'ny fampielezan-kevitry ny mpanjakan'i Babylona, ​​Hammurabi, tokony ho tamin'ny 1730 talohan'i Kristy. Ny Fehezan'i Hammurabi dia ...
Sata-pitiavan'izao rehetra izao
Mino aho fa amin'ny fotony voalohany, ny ara-pinoana rehetra na filozofia dia manasa ny olombelona tsirairay ho amin'ny ezaka sy ny fandresena amin'ny tena, mba hamolavola amin'ny tena ...
Ny fampianaran'i Mooji (Videos)
Mooji dia lehilahy ara-panahy Jamaikana izay manao lahateny. Izy dia iray amin'ireo olona 100 manan-kery indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy. https://www.youtube.com/watch?v=3fAjVeGwyKg&list=PLFB9E5172A832A801
Ny fitoviana eo amin'ny Papyrus Ani sy ny fitsarana farany
Ny papyrus Ani dia avy amin'ny tarana-18 io. Hita tao am-pasana tao Thebes tamin'ny taona 1887 ary novidiana tamin'ny tranom-bakoka anglisy avy amin'ny tranombakoka anglisy tamin'ny taona 1888….
Yoga dia mpiambina ny lalàna mandrakizay. Ny yoga no mitahiry fahalalana. (Yoga-anka) FAMARIHANA NY TENY YOGA: Avy amin'ny faka Sanskrit "yuj ...
Ahoana ny fomba fisaintsainana transcendental?
Ny fisaintsainana transcendental dia mandaitra mahomby amin'ny teknika fialan-tsasatra. Izy io dia manome fitsaharana ara-batana sy ara-tsaina lalina, manafoana ny adin-tsaina. Fanalahidy ho an'ny fahasalamana tsara, ahena ny TM ...
Ahoana no nahatonga ny mainty ho lasa Kristianina?
Ny tany mainty dia tsy nanjary Kristiana noho ny safidiny irery fa natao tamin-kery. Ny tantara afrikanina kosa dia manambara amintsika fa ny lavitra ny tsy miraharaha an 'Andriamanitra, ny afrikana dia nanana ...